सन्तानको जिवनमा संघर्षले भरिएको नाम हो बुवा। शंकर बि.क - Nepal's News Portal
सन्तानको जिवनमा संघर्षले भरिएको नाम हो बुवा❤️
शंकर बि.क प्रकाशित मिति : शुक्रबार, भदौ १३, २०७६
सन्तानको जिवनमा संघर्षले भरिएको नाम हो बुवा
मातृ देवो भव !
पितृ देवो भव !!
अर्थात: आमा र बुवा दुबै भगवान हुन । जर्ज हबर्टले भनेका छन एउटा बुवा सयौं शिक्षक भन्दा महान हुन्छन् । संसरमा हरेक बिहान विस्तारै गएर एउटा साझमा रुपान्तरण हुन्छ । उदाएका सुर्य अस्ताउने रित छ । बिहान दिन र साझको क्रमसंगै जिवनमा बढ्दै गएर बुवा कहिले छोरा कहिले आमा त कहिले छोरीको भुमिका निर्वाह गर्ने क्रम चलिरहन्छ ।
चाहे हामी जुनसुकै धर्म सम्प्रदायका भयता पनि हामी मध्ये धेरैले तोते बोलि बोल्दै बुबाको हात समाउदै हिड्न सिकेका हौँ । तिनै बुबाको मुख हेर्ने दिवस हो आज । बुवा आफैंमा एउटा अब्बल शब्द हो जसलाई ब्याख्या गर्न कति कठिन छ । माता पिता संगको सम्बन्ध जति विशाल छ त्यसैगरी जिवनमा दुबैको संघर्ष पनि उतिकै विशाल छ। जति आमाले संघर्ष गरेकी हुन्छिन त्यतिकै मात्रामा बुवाले संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् । चाहे त्यो सन्तान सुखीको लागि होस् वा अन्य कुरा !
मलाई जिवनको यो क्षणसम्म सुखदुःख गरेर ल्याइपुर्याउने संघर्षलाई मैले कसरी भुल्न सक्छु र कसरी भुल्न मिल्छ । मैले भगवान त देखेको छ्न तर पनि पृथ्वीमा देखेका महान भगवान हुन मेरा बुवा ! जिवनको यो समयसम्म आइपुग्न उहाँले भोग्नु भएको सुखदुःख र संघर्षका पलहरु उहाँको अनुहारबाट म प्रष्ट बुझ्न् सक्छु । आज हजारौं बुवाहरु आफ्नो जिवनको उर्जावन समय सन्तानको सुख प्राप्तिको लागि खर्च गरिरहेका छ्न अझै भनौं सन्तानको उज्ज्वल भविष्यको पाइला कोर्दै छ्न । राजमार्ग बनाउदै छ्न । सन्तानको सुख प्राप्तिको लागि जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार छ्न । आज पनि हजारौं बुवाहरु खाडीमा बेल्चा चलाउन बाध्य छ्न ती हजारौं बुवा प्रती मेरो कोटि कोटि प्रणम छ।
यसरी जिवनको अमुल्य समय सन्तानको सुखको लागी खर्चने बुवा आमाहरुले बृद्वा आश्रम बस्न नपरोस् सम्पूर्णमा कुसे औषी अर्थात बुबाको मुख हेर्ने दिनको शुभकामना ।